Mampihatra Ny “Fitànana am-ponja Tsy Misy Fitsarana” i Malezia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Novambra 2013 9:01 GMT
Araky ny nambaran'ny governemanta, hanampy ny polisy amin'ny ady amin'ny heloka bevava nomanina mialoha ilay lalàna vaovao. Sary nalain'i Deucrox99, Wikipedia (CC License)
Mba hiadiana amin'ny heloka bevava nomanina mialoha, dia nandany ny fanitsianà ny lalàna nivoaka ny taona 1959 hisorohana ny heloka bevava na ny Prevention of Crime Act (PCA) i Malezia, izay ahafahan'ireo manam-pahefana mitazona am-ponja hatramin'ny roa taona mahery ireo mpanao heloka bevava sy ireo mpangalatra na dia tsy misy fitsarana aza.
Nanamafy ny governemanta fa ilaina ny sazy hentitra toy io PCA io mba hiatrehana ny olan'ny firongatry ny heloka bevava ao amin'ny firenena. Nokianiny ny fanafoanana ilay didy hitsivolana “Emergency Ordinance (EO) – ho an'ny hamehana” izay niteraka resabe, ary koa ny Fepetry ny Filaminana Anatiny na ny Internal Security Act (ISA) tamin'ny firongatry ny heloka bevava niseho vao tsy ela akory izao. Nandritry ny fotoana elabe dia notondroin'ny mpanohitra ho fepetra henjana be izay mazàna ampiasain'ny governemanta hitànana na hilàna vaniny amin'ireo mpanohitra io EO sy ISA.
Nolaniana ihany ilay fanitsiana ny PCA tamin'ny fiantombohan'ity volana ity na dia maro aza ireo mpanakiana niampanga ny tompon'andraikitra ny lalàmby ho nahatonga ny fanekena iny didy iny tao amin'ny Parlemanta.
Nanome toky ny sarambabem-bahoaka anefa ny governemanta fa tsy natao hiadiana amin'ireo mpanakiana na ireo mpanohitra mihitsy iny lalàna vaovao iny. Nohazavainy fa ara-drariny ary mangarahara ny fanapahan-kevitra rehetra. Kanefa tsy nampiato ny hetsi-panoherana nataon'ireo fikambanana maro izany fanomezan-toky izany, fa vao mainka koa aza nampitombo ny fanoheran'izy ireo ny lafiny maro samihafa tamin'ilay fanapahan-kevitra.
William Leong, Mpikambana ao amin'ny Parlemanta ao Selayang, dia nanamafy fa ilaina ny ‘politika avo lenta’ hiadiana amin'ny heloka bevava :
…Tsy fitaovana mora ampiasaina na fanapahan-kevitra vonjy maika no ilain'ny vahoaka Maleziana ho an'ireo mpanatanteraka mba hanenjehana ny olona amin'ny fiatrehana ny fampihenana ny heloka bevava, fa indrindra indrindra, ilaina ny politka avo lenta afaka mampijanona maharitra tanteraka ny tahan'ny heloka bevava, ary tsy ahitana fanitsakitsahana ny zon'ny mponina koa anefa ao anatin'izany.
Mohamed Hanipa Maidin, mpikambana ao amin'ny parlementa ao amin'ny Sepang, dia nanoritsoritra ny PCA ho toy ny Lalàna ratsy ary fitsaboana diso ho an'ny olana ara-tsosialy ao Malezia :
Lalàna ratsy ilay PCA nasiam-panitsiana. Manome fanafody diso ho an'ny aretina eo amin'ny sosialintsika io. Na dia sarotra aza ny hanome porofo eo anoloan'ny Fitsarana amin'ny resaka “Mafia”, dia any an-kafa no misy ny vahaolana.
Mila miezaka sy mihavao hatrany mankany amin'ny fahaiza-manao matihanina kokoa ny polisy.
Nandritra izany, i Tan Sri Robert Phang avy ao amin'ny fikambanana Social Care Foundation dia niaiky ny filàna mampiditra lalàna vaovao hiadiana amin'io fiovàna goavana amin'ny resaka heloka bevava io :
Tsy mitovy tamin'ny andro taloha intsony ny antony hitrangan'ny heloka bevava ankehitriny. Aza manohitra noho ny hafaliana hanohitra fotsny. Mila ho isan'andro isika no mandre fifampitifirana misy eo amin'ny olon-tsotra. Tena mampahatahotra izany.
Misy foana ny fiovàna. Anio, mety hoe tsara fitaovana ny polisy, kanefa tsy vitantsika ny manara-maso ireo lehiben'ny Jiolahy izay mety hametraka ny tenany ho matihanina kokoa amin'ny fampiasan'izy ireo ny Aterneto.
Tena ady marina atao tokoa amin'ireo mpanao heloka bevava izy ity. Noho izany, tokony lalàna mahitsy sy marina no apetraka.
Kanefa i Tan Sri Simon Sipaun avy ao Proham dia nanakiana ny fampidirana indray ny fitanàna am-ponja tsy misy fitsarana :
Ny fantsika farany amin'ny tranovoron'ny zon'olombelona ao Malezia dia nanana endrika fanitsiana ny lalàna nivoaka ny taona 1959 (PCA) Hisorohana ny heloka bevava, lalàna izay efa nopotehina tamin'ny bulldozer, ary natsangan'ny Parlemanta indray taorian'ny misasak'alin'ny 02 Oktobra 2013.
Niverina hanao valifaty ny ISA. ISA2 io. Mampiseho ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona tsy misy ohatra izany ny fanagadràna tsy misy fitsarana. Fahita matetika any amin'ny firenena mpanao jadona izany. Raha toa ka manana porofo feno ny governemana hisamborana olona iray, dia tokony hanan-javatra mazava ho entina hiampangana io olona io izy noho izany..
Ny Malaysian Bar, ny “Sabah Law Association ” ary ny Fikambanan'ny Mpisolovava ao Sarawak dia nitsipaka ilay fanitsiana zay mety hampihena ny hahatafidiran'i Malezia ao anatin'ny fenitra Iraisam-pirenena momba ny Zon'olombelona :
…Ny valin'ny fiatrehana ny ady atao amin'ny heloka bevava dia tsy afaka haorina amin'ny fampidirana lalàna izay hampihena ny fidirantsika ao amin'ny fifehezan'ny lalàna, amin'ny ara-drariny sy anaty lalàm-panorenana. Tsy mampiseho ny toerana misy ny heloka bevava eto amin'ny firenena mihitsy ireo fanovàna henjana be natolotra ireo. Ny mifanohitra aza, mampiseho ny tsy fahampiana sy ny tsy fahaizan'ny polisy miatrika ny ady atao amin'ny heloka be vava araky ny tokony ho izy.